चुलो बनाएरै मासिक १ लाखभन्दा बढी कमाइ ! - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
चुलो बनाएरै मासिक १ लाखभन्दा बढी कमाइ !
असार ८ गते, २०७२ - १५:४१
८ असार, कञ्चनपुर । सुधारिएको चुलो बनाएर कञ्चनपुरको देखतभूली– ९ कटानकी लक्ष्मी चौधरीले मासिक रुपमा १ लाखभन्दा बढी कमाई गर्दै आएकी छन् ।
दुई वर्षअघि तालिम लिएर दक्ष बनेकी चौधरीले निरन्तर सुधारिएको चुलो बनाउने कार्य गर्दै आएकी छन् । सुधारिएको चुलो बनाउने कार्यमा संलग्न उनले प्रतिचुलो बनाएबापत घरधनीबाट १ सय ५०, नगरपालिका/गाविस कार्यालयबाट ३ सय र संस्थाबाट १ सय गरी ५ सय ५० रूपियाँ रकम पाउँछिन् । दैनिक ५ देखि ८ वटासम्म सुधारिएको चुलो निर्माण गर्दै आएको उनले बताइन् ।
कञ्चनपुरका नगरपालिका र गाविसलाई धुवाँरहित घोषणा गर्ने सरकारी योजनाअनुरुप सबैले सुधारिएको चुलो राख्न थालेकाले काम गर्न भ्याइनभ्याई भएको उनी बताउँछिन् । सुधारिएको चुलो बनाउने तालिम नलिँदा घरकै काम गरेर बस्नुपरेको विगत कोट्याउँदै उनले भनिन्– “घरको चुलोचौकामै सीमित हुँदा कमाइ थिएन । श्रीमानले मजदुरी गरेर ल्याएको पैसाले जेनतेन परिवार पाल्नका लागि खर्च चलेको थियो ।”
चालीस वर्ष नाघेकी चौधरी सुधारिएको चुलो बनाउने तालिम लिँदा यतिको कमाई होला भनेर नसोचेको बताउँछिन् । “पहिला घरखर्च श्रीमानको मजदुरीबाट चल्थ्यो अब मेरै कमाइले चल्न थालेको छ । बचेको रकम बैंकमा जम्मा गरी पक्की घर बनाउने योजना छ” उनले सुनाइन् ।
हालसम्म कृष्णपुर, दैजी, पीपलाडी, देखभूलीमा गरी ६ सयभन्दा बढी चुलो निर्माण गरेको उनले बताइन् । उनीसँगै सुधारिएको चुलो बनाउने तालिम लिएका तीसभन्दा बढी महिलाले चुलो बनाएर यथेष्ट आम्दानी लिँदै आएका छन् । निर्माण गरिएको सुधारिएको चुलोको विशेषतासँगै चुलो चलाउने तरिकाका बारेमा समेत घरधनीलाई महिलाले बताउने गरेका छन् ।
थोरै दाउरा लाग्ने, छिटो खान पाक्ने, धुवाँ नआउने भएकाले स्थानीय बासिन्दाको रोजाइमा सुधारिएको चुलो परेको चुलो बनाउँदै आएकी मञ्जु चौधरीले बताइन्– “अनिवार्य रुपमा सबैले सुधारिएको चुलो बनाउन थालेकाले दक्ष चुलो, स्टोभ मास्टरलाई कमाई गर्ने अवसर जुरेको छ ।”
“सुधारिएको चुलो बनाउने तालिम लिएका महिलाले मासिक रुपमा पचास हजारदेखि एक लाखभन्दा बढी कमाई गर्न थालेकाले यसलाई पेसाकै रुपमा रोज्न पुगेका छन्” उनले भनिन् ।
असार ८ गते, २०७२ - १५:४१ मा प्रकाशित